Amin'ny rhythm maoderina eo amin'ny fiainana dia misy ny fanenjehana isan-karazany manodidina antsika. Mba hahafahanao miatrika ny olana rehetra, dia ilaina ny mitandrina mandrakariva. Na izany aza, amin'ity tranga ity dia mitebiteby foana isika, mihamitombo tsikelikely ity tranga ity ary azo antoka fa hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamantsika izany. Miaraka amin'ny taham-pidirana toy izany, dia mora ny manatona ny fahaketrahana, ny aretin'andoha tsy miova ary ny fihenan'ny metabolisma, izay mitarika ho amin'ny fampiroboroboana cellulite, lanjany be loatra sy olana hafa, manakaiky ny faritry ny hopitaly.
Ahoana no ahafahanao mampitony ny hatezeranao?
Raha toa ka sarotra loatra ny toe-javatra iainanao ary mitaky fitsaboana manokana ny olana, dia tokony hifanerasera aminy ianao ary ho afaka hiteny ny pills izay mampitony ny akaninao. Na izany aza, tokony voamarika fa azo atao tsara ny mampitony ny hareza ao an-trano. Ny tena manan-danja dia ny hianatra hamantatra tsara raha efa eo am-pilaharana ianao ary amin'izao fotoana izao mba hijanonana amin'ny fotoana, aza manahy. Ny dingana manaraka dia ny mamela ny toe-javatra, miala sasatra. Asa - fa tsy amboadia, any anaty ala tsy handositra. Ary ny fahasalamanao - afaka. Manaova fofona lalina, manisa folo, mahatsiaro tena, ny vatanao ao amin'ny tontolo tena izy, mahatsapa fa eto ianao ary ankehitriny. Hamafiso ny fofony mandritra ny telo segondra fara-fahakeliny, ary ho tsapanao ny fiadanan-tsaina. Tsy mila miaina amin'ny fomba manokana ianao, amin'ny feon'ny rhythm iray na haingana, dia ampy ny mahatsapa sy mahatsapa ny dingana manontolo amin'ny fialan-tsasatrao, mifantoka amin'izany, dia handavaka kely amin'ny toe-javatra mampikorontana ianao.
Fomba ahoana no hampitony ny hatezeranao amin'ny fanafodin'ny volokano?
Inona no hosotroina amin'ny tony? Zana-tsokajy, karokaroka sy siramamy no fomba lehibe hampitoniana ny vavoninareo. Ny vokatra toy izany dia tsara ho an'ny fatiantoka mahery vaika, ny fery, ny fahasalamana samihafa ary ny aretina. Kanefa, diniho ny fitsipika momba ny fanaovana io sokatra io. Ny vatana dia afaka mitondra izany, alohan'ny fampiasana azy, dia tsy maintsy ampidirina mandritra ny 6 ora farafahakeliny, azonao atao koa ny manampy tantely hohanina ho fanandramana mahafinaritra kokoa.
Inona no sakafo mahasalama ny ovy? Ny fanafody enti-malemy dia mahafaoka koa ny fanasitranana pio, na izany aza, mariho fa mampitombo ny fihenan'ny vavony. Raha te hanao sary ianao dia mila tsoka. hazo fotsy nopotehina, nanondraka 3 kaopy feno rano mafana. Mijanona antsasak'adiny, maka 10 minitra alohan'ny sakafo 2 na in-3 isan'andro.
Mba hampitonena ny ranomason'ireo lalao dia ohatra, akanjo, akanjo, rosary, sary. Ary tsaratsara kokoa, mandeha eny an-dalambe, amin'ny tontolon'ny rivotra vaovao dia tena hampitony.
Fomba hampitony ny voaly
Tena betsaka tokoa izy ireo. Ny iray amin'ireo fomba ireo dia ny manosika ny teboka eo ambanin'ny orona eo ambonin'ny molotra ambony. Tsindrio miaraka amin'ny herinao rehetra mandritra ny telo segondra farafahakeliny, ary izany dia hanampy anao hiaraka aminao.
Araka ny fantatrao, ny fahitana dia mitondra antsika vaovao be dia be momba ny tontolo ivelany, momba ny tontolo iainantsika, izany no mahatonga ny fahatsiarovan-tena ho sarotra ny mamorona sary mampihetsi-po sy mahafinaritra. Manamafy ny manam-pahaizana fa ny tena tsara indrindra amin'ity tranga ity dia sary misy loko manga sy fotsy. Alao sary an-tsaina ny rano manga mangatsiatsiaka miaraka amin'ny fotsy fotsy, alao sary an-tsaina ny fomba itondrany anao. Dia alao sary an-tsaina fa ny rano rehetra dia mikoriana ao anatin'ilay dabilio, ary ao ambadik'izany ny olana rehetra, manindry ary mahatonga ny traikefa.
Ny fomba tsotra sy mahomby dia ny mandeha any amin'ny efitra fandroana, mihodina rano mangatsiaka, manasa tànana sy tanana mangatsiaka miadana manoloana ny tarehy, ny tendany, manao fanafody maivana ao amin'ny tendany, ary hanampy ihany koa ny hanamaivana ny fihenjanana.
Ireo torohevitra tsotra ireo dia hanampy anao hampitony ny hatairanao alohan'ny hatoriany, ny firesahana, ny fivoriana na ny fivoriana manan-danja iray. Ny tena zava-dehibe dia ny mitadidy fa eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy antony marobe mampihena ny isan'ny selan'ny nierona.
Talkback - inona ity programa ity ary ahoana no fampiasana izany?
Ahoana no hampitomboanao ny voambolana?
Ahoana ny fomba hananganana fifandraisana amin'ny zanak'olon-dehibe?
Lalao ho an'ny fampandrosoana ny atidoha
KPI - inona no atao amin'ny raharaham-barotra ary ahoana no fomba hamahana izany?
Ahoana no hampivoarana ny fomba fisainana?
Ahoana no hamolavolana saina?
Ahoana no hanatsarana ny fifantohana amin'ny olon-dehibe?
Ahoana no hampivoarana ny fahatsiarovana sy ny fifantohana?
Tovovan'ny vehivavy miasa
Ahoana ny famokarana soufflé?
Mascara - fanombanana 2016
Ny renirano lehibe indrindra any Afrika
Ornella Muti tamin'ny fahatanorany
Bevohoka rehefa antibiotika
Tendrombohitra tamin'ny Novambra - famantarana malaza
Eldar ho an'ny fahavoazana
Zava-baovao mahaliana momba an'i Bosnia sy Herzegovina
Millet dia tsara sy ratsy
Fihetseham-piraisana ara-nofo tao Hollywood: Voampanga ho nanao fanorisorenana i Harvey Weinstein
Fanomezana ho an'ny vehivavy nandritra ny 40 taona
Fiatrehana ny vehivavy 2013
Andro fifadian-kanina fifadian-kanina